Sivuliwe isikhululo samapolisa – Elitsha
21st June 2016 Mzi VelapiUnathi TutaEdition 6 0 Xhosa
Abahlali belinde ukuncedwa kwisikhululo esinamavili eSite C. Ifotwe ngu Mzi Velapi.
Bekucacile ukuba olu tyelelo lunento yokwenza nezopolitiko nolonyulo loomasipala oluzayo. Ikhomishini yophando yase Khayelitsha eyayiphanda ukungasebenzi kakuhle kwamapolisa yafumanisa ukuba kukho ukungalingani koovimba kwiindawo ezihlelekileyo ezifana neKhayelitsha nakwiindawo ezihlala abantu abanemali.
Abaphambili kurhulemente nasemapoliseni ngelixa befika eKhayelitsha. Ifotwe ngu Mzi Velapi.
Ngexesha esenza intentho yakhe, usekela-mphathiswa uMaggie Sotyu uthe baza kuzisa iizikhululo zamapolisa ezinamavili ezithandathu kweli phondo leNtshona Koloni kulo nyaka-mali sikuwo. Oka Sotyu uthi landile inani labantu abahlala kula ngingqi oko ke kunyanzelisa kubekho isikhululo samapolisa kula ngingqi.Uthi bakwinkqubo yokukhangela indawo elungele ukwakha isikhululo esisigxina kodwa oko kuyakuthatha ixesha elide nanjengoko ziliqela izinto ezilungiswayo.
Uthi isikhululo samapolisa kwingingqi yaseMakhaza siya kwakhiwa ngonyaka ka 2018. Kulapho usihlalo weqonga lophuhliso lweKhayelitsha uMnu Ndithini Tyhido athe kufike ixesha ukuba isebe lesipolisa liqwalasele ukuba alinakube libeka isikhululo esinamavili kusini na eMakhaza.Loo kaTyhido uthe bayayivuyela into yokuba iSite C ifumene esi sikhululo kuba ulwaphulo mthetho luxhaphakile. Ukwathe kukhona umntu ekufuneka ephundule ngolwaphulo mthetho olugquba kwingingqi yaseTaiwan ingengawo amapolisa.
Umphathi wamapolisa kwindibanisela yezikhululo zaseKhayelitsha uMajor General Brandt uthe uyabulela kwicandelo lesipolisa ngesi sikhululo kwaye uyakuqinisekisa ukuba sisebenza ngendlela eyiyo.
Ukanti umbutho olwelwa ubulungisa luthe Social Justice Coalition (SJC) ithe yavakalisa ukuba bayalwamkela olu ngenelelo noxa luluncinci nje. Lo mbutho yayingomnye owathi wanikezela ubungqina kwikhomishoni yaseKhayelitsha eyayijonga indlela amapolisa asebenza ngayo. Othethela iSJC uChumile Sali uthe esi sikhululo sizakwandisa ukubonakala kwamapolisa, ntoleyo ezakunqanda uburhalarhume. “Into esiyibethelelayo yeyokuba kufuneka isikhululo esisigxina eSite C kwaye esi sinamavili singajikelezi, sihlale ndawonye”, utshilo lo kaSali.
I-Elitsha iye yatyelela esi sikhululo ePlaza eSite C. Iye yathetha nabahlali ebebephuma kuso.
Nomawele Ndyundyu (42) uthe ebeyokuqinisekisa amaxwebhu akhe, kwaye uncedakale ngokukhawuleza. “Ikufutshane ngoku indawo yoncedo” utshilo.
Ntombozuko Tabo (29) naye ebeyokuqinisekisa amaxwebhu uthe, “ngoku akukho sidingo sokuba siye eSite B”.
Zimkhitha Ntongo ( 21) naye ebeyokuqinisekisa amaxwebhu uthe, “bendingenayo nemali yokuya eSite B, izakusinceda into yokuba nesikhululo apha”.
Mninikhaya Ventfolo (51) ebeyokwenza ingxelo efungelweyo (affidavit), uthe, “intle lento yokuba nesikhululo apha, kwaye izakubaluncedo kubantu balapha”.
Also read: Babelana ngolwazi nenkcubeko